Ntughari na-emepụta nri nke kacha mma na-eme nri 10 Gallon China Manufacturer
Nkọwa:Okpokoro Iyi Maka Eke,Ụlọ Egwuregwu Egwuregwu Eletriki,Ntughari Nkịtị Kpo akwa 10 Gallon
Home > Ngwaahịa > Nkịtị Nkịtị Na-emepụta Ihe > N&#39;okpuru kpo akwa tank > Ntughari na-emepụta nri nke kacha mma na-eme nri 10 Gallon
N'okpuru tankị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe ọkụkụ
Na-egwusi egwu n'okpuru tank na-ekpo ọkụ tank 8W na-emepụta ihe na ọdụ ụgbọ elu nke British
N'okpuru ebe a na-ekpo ọkụ ma ọ bụ kpo oku ọkụ, ọ bụ ụzọ dị mma iji nye "ọkụ ọkụ" maka ebe okpomọkụ na mbara igwe ma ọ bụ ọzara. Obere nkedo na-esi ike na-agbanye na ala nke mbara igwe. Ngwongwo ndị a agaghị ekpo ọkụ, ma ha ga-enyere aka mee ka okpomọkụ dị n'elu ala nke terrarium gị. Ha bụkwa ụzọ dị mma iji nyekwuo ọkụ n'ime mkpuchi ma ọ bụ n'akụkụ ndị ọzọ nke tankị gị adịghị ekpughere n'ìhè. Okpomọkụ na-agba ume usoro nsị nke anụ ụlọ gị ma na-enye nkasi obi nke ọkụ ha ga-enweta na gburugburu ebe obibi ha. Iji ájá ma ọ bụ okpomọkụ yiri nke na-eduzi ihe na-emepụta ihe ga-enye ohere ka a kpụchaa ọkụ kachasị mma iji mezuo irè. A na-ahụkarị anụ ọhịa bearded, uromosax, mgbochi, na ihe ndị ọzọ na-ahụ n'anya na-ahụ n'anya! UL mma emume mmewere! Ọ bụrụ na ị na-eji n'okpuru osọ ahụ hụ na ị ga-enye ikuku. Debe bumpers ndị dị na nkuku anọ nke ogige ahụ iji mee ka elu dị elu na tank ahụ ka kpoo ọkụ ahụ adịghị agbanye n'ala. Ọ bụrụ na ị na-eji n'akụkụ nke ogige jide n'aka na ị ga-ahapụ ohere n'etiti mgbidi na oghere maka ikuku. Egbu na nha: Obere: 4x7 ", 4 watts Obere: 6x8", 8 watts Ọkara: 8x12 ", 16 watts Large: 8x18", 24 watts
Nkịtị Na-ekpochapu Ụka 8W N'okpuru Ihe Ndị Na-ekpuchi Tank maka Ihe Nkume Tropical na Tempe
Okpokoro Iyi Maka Eke Ụlọ Egwuregwu Egwuregwu Eletriki Ntughari Nkịtị Kpo akwa 10 Gallon Okpokoro kpoo akwa oche Okpokoro kpoo akwa Petsmart Okpokoro Igwe ọkụ nke ala Okpokoro Ogbugba maka Ememe Ochie Okpokoro Igwe Ọkụ na UL